I-WholesaleSP-RK001 eSebenzayo enegwele eliBomvu Irayisi yeLovastatin/Monacolin K yokunciphisa i-Cholesterol factory kunye nabavelisi |Spring-Bio
I-SP-RK001 esebenzayo enegwele elibomvu leRayisi yeLovastatin/Monacolin K yokunciphisa iCholesterol
Umthombo: Monascus Purpureus
Elinye Igama: Hongqu, Red Koji,I-Red Yeast Rice, I-Red Yeast Rice Extract
Iinkcukacha: 0.1% ~ 5.0% Monacolin K
100% Yendalo Ivundiswe!
Umxholo ophezulu we-Acid Monacolin K!Citrinin Mahala!GMO Mahala!
Imbali yerayisi yemvubelo ebomvu.
I-Red Yeast Rice yimveliso eyenziwe ngokuvutshelwa kwesintu, kwaye inamawaka eminyaka yembali yokusetyenziswa.Kwangoko kwiNkulungwane yeshumi kwisiShayina samandulo, yayisetyenziswa ekutyeni nakwiyeza, yayijongwa njengezongezo ezisempilweni, kwaye inefuthe elihle kunyango lwezifo ezithile.Iincwadi ezimbini "Heavenly Creations" "Compendium of Materia Medica" ichaza ixabiso layo leyeza kunye nomsebenzi weRed Yeast Rice.
Yintoni Umsebenzi oBomvu weYeast Rice?
Irayisi ebomvu yemvubelo yirayisi evundiswe yigwele elibomvu, iMonascus purpureus.Isetyenziswe ngamaTshayina iinkulungwane ezininzi njengento yokugcina ukutya, umbala wokutya (inoxanduva lombala obomvu wedada lasePeking), iziqholo, kunye nesithako kwiwayini yerayisi.
Irayisi ebomvu yemvubelo iyaqhubeka ibe yinto yokutya e-China, eJapan, nakwiindawo zase-Asia e-United States, kunye nomlinganiselo oqikelelwayo wokusetyenziswa kwe-14 ukuya kwi-55 grams yerayisi ebomvu yemvubelo ngosuku umntu ngamnye.
Irayisi yemvubelo ebomvu sele isetyenziswe e-China iminyaka engaphezu kwe-1,000 ngeenjongo zonyango.Irayisi ebomvu yegwele yachazwa kuluhlu lwamandulo lwamaShayina lwamachiza njengeluncedo ekuphuculeni ukuhamba kwegazi kunye nokunciphisa ukungatyibiliki kunye norhudo.
Kutshanje, irayisi ebomvu yemvubelo iye yaphuhliswa zizazinzulu zaseTshayina naseMelika njengemveliso yokwehlisa i-lipids yegazi, kubandakanya i-cholesterol kunye ne-triglycerides.
Ungawufumana njani uMsebenzi oBomvu yeRayisi yePowder?
-Itshathi yokuHambayeNgwele kwiRed yeast irayisi-Ifom evundiweyo Into eqinileyo
Yintoni ukwakhiwa kweFunction Red Yeast Rice Powder?
Ukubunjwa ngobunzima: isitashi (73%), iprotheni (5.8%), ukufuma (3-6%), i-unsaturated fatty acids (1.5%), i-monacolins (0.4% ~ 2%), uthuthu (3%), kwaye ulandele izixa ze-calcium, i-iron, i-magnesium kunye nobhedu.
Azikho izongezo, izithinteli, isinyithi esinzima, okanye izinto eziyityhefu, njenge-citrinic acid.
I-Red Yeast Rice amacandelo asebenzayo
Iintlobo ze-11 ze-Monacolin K zifunyenwe kwi-Red Yeast Rice, njenge-Monacolin L. Monacolin M, i-Monacolin X njl.
I-Monacolins idityanisiwe, kodwa i-syntheses yabo ihluke kwihlabathi.Xa kuthelekiswa noMonaclin K,
Ezinye i-Monacolins ziphantsi kakhulu ekusebenzeni kwe-HMG-CoA reductase inhibitors.
2.Umtshiniism yothintelo olusebenzayo lwe-eholesterol biosynthesis esibindini
3.Izakhiwo zeekhemikhali zeefom ezintathu kunye neendlela zabo zokuguqula.
3.1.Ifomu yeasidi iMonacolin K
Ifom ye-Acid i-Monacolin K ifana ne-HMG-CoA kwisakhiwo, ngoko inokudibanisa ne-HMG-CoA reductase ukuze idlale umsebenzi wokuthintela ukhuphiswano, ngenxa yoko ivimbela ukuhlanganiswa kwe-cholesterol.
3.2.Ifomu yeLactone iMonacolin K
Ifomu yeLactone iMonacolin K ayinamsebenzi kwaye idinga i-hydrolyzed yi-carboxyesterases, emva koko iguqulelwe kwiFomu ye-Acid esebenzayo, kwaye ke inokusebenzisa umzamo wayo wokunciphisa i-lipid emzimbeni.
3.3. Uphononongo lubonise ukuba amacandelo amane aphambili ekusebenzeni iRed Yeast Rice iwunike umsebenzi wokwehlisa i-cholesterol:
- ifom ye-Acid yaseMonacolin K;
- Ifom yeLactone eMonacolin K;
- Ii-homologues zaseMonacolin;
- Iiasidi ezinamafutha angaxutywanga.
Uyizuza njani impilo yakho?
1. Ukunciphisa i-cholesterol ye-LDL kunye nokunyuka kwe-HDL i-cholesterol ngaphandle kwemiphumo emibi, kwaye inqanda i-cholesterol synthesis kwisibindi ngokuvimbela isenzo se-HMG-CoA reductase eyaziwayo ngokuphakamisa amanqanaba e-cholesterol ukugcina amanqanaba e-cholesterol.
2. Ukuxhasa amanqanaba engcinezelo yegazi enempilo, ukulinganisela iswekile yegazi, amanqanaba aphantsi e-serum lipid, ukuphucula igazi
ukujikeleza, ukukhuthaza impilo yentliziyo;
3. Ukukhuthaza ukusebenza kwe-spleen enempilo kunye nesisu;
4. Inzuzo kwimpilo yamathambo kunye nokusebenza;
5. Ukuphucula ukugaya, ukukhuthaza ukukhula kweeseli eziqhelekileyo, kunye nokunciphisa inkqubo yokuguga.
Ngaphambili: SP-H010 Isicatshulwa seTea yeNdalo emnyama iTheaflavine CAS: 4670-05-7
Okulandelayo: I-SP-AT001 i-Ferrous Fumarate njengentsimbi ekhuselekileyo nesebenza ngamandla endalo eyongeziweyo kwizilwanyana.
Irayisi enegwele elibomvu
Esebenzayo Red Yeast Rice
I-Red Yeast Rice Extract
Imvubelo ebomvu yerayisi iMonacolin K
I-Red Yeast Rice Pigment
SP-VF006 Umgangatho ophezulu weVithamini H 2% (i-Biotin 2%) ...
ICurcumin yeTurmeric Amacwecwe eCurcumin Piperine Astaxanthin Beadlet ICurcumin Astaxanthin Powder ICurcumin Piperine Capsules